မုန်းတဲ့ကဗျာထဲမှာ မိသံစဉ်ရဲ့ လှောင်ရယ်သံတွေ
“မုန်းတဲ့ကဗျာထဲမှာ မိသံစဉ်ရဲ့ လှောင်ရယ်သံတွေ”
“နင် . . ဘယ်မှာလဲ မိသံစဉ်”
ငါ့နှုတ်ခမ်းဖျားမှာ နင့်နာမည်လေး ဝေ့တက်လာ
“မိသံစဉ်ရေ . . . ”
“မိသံစဉ်ရေ . . .”
. . . . . . “မိသံစဉ်ရေ . . . ”
ငါ့ဆီမှာနင်နေပါ . . . အဲဒီလို
အချစ်ဟာ ဆွတ်ပျံ့ဖွယ်ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်မှာပဲ . . . . လို့
ဥသြငှက်ကလေးကဗျာ ၊ မိုးစက်ဖြိုးဖြောက်ကဗျာ ၊
နှင်းပွင့်မှုန်ဝေကဗျာ မိသံစဉ်ရေ . . . . ငါ သာယာခဲ့မိတယ်
ငါ့ကိုယ်ငါ နင်ဖြစ်တယ်လို့ ထပ်တူကျတဲ့အထိ နင့်အိပ်မက်ဟာ ငါပဲလို့တွေးရင်း အိပ်မပျော်တဲ့အထိ
ဒါဟာ . . . နင့်ရဲ့ ငါ့ဆီပို့နေတဲ့ ကြေးနန်းသင်္ကေတပဲလို့တွေးတယ်
ငါပြုံးတယ် ၊ ငါရယ်တယ် ၊ ငါကြည်နူးတယ်
အခု . . . ငါမဟုတ်တဲ့ အခြားတစ်ပါးကိုကြည့်တဲ့အခါ
ငါ့အနားမှာ နာကျည်းစိတ်တွေ မိုးရေချိန်ခပ်များများနဲ့
ဥသြငှက်ကလေး တောင်ပံကျိုးသံနဲ့ . . . .
. . . . . . . . မိသံစဉ်ရယ် . . . . . .
နင့်ကိုငါ သိပ်မုန်းတယ် မိသံစဉ်
ဆောင်းကနွေကို မုန်းသလိုမျိုး နင့်ကိုငါမုန်းတယ်
မီးရှူးမီးပန်းဟာ ဘယ်တော့မှ ကောင်းကင်အထိ မရောက်နိုင်သလိုမျိုး
ငါဟာ . . . ဝေးလွင့်ခြင်းဆီ တဖြည်းဖြည်းနီးကပ်သွား
ဓါးတစ်လက်ကတောင် သူ့ချွန်ထက်မှုကို သစ္စာပြန်ဖောက်ခဲ့တဲ့နောက်
တူဖြစ်လိုက်ပေဖြစ်လိုက် တစ်လှည့်စီထိုးစိုက် မိုက်ကန်းကြတဲ့နောက်
အဆုံးမှာ . . . . ငါ့လှေကလေးမှောက်ခဲ့ပြီ
ငါဟာပျောက်ရှလို့ . . . ငါဟာ အဆိပ်ပင်လိုပွင့်လို့ . . . (၉)
နင့်ကိုငါမြင်တယ် . . ဒါ့ကြောင့် ငါ “ကန်း”ခဲ့တယ်
နင့်ကိုငါရှာဖွေတယ် . . ဒါ့ကြောင့် ငါ “ကန်း”ခဲ့တယ်
အမှောင်ညဟာ ကြယ်တွေကို ငတ်မွတ်နေရတယ် မိသံစဉ်
ချစ်ခြင်းတရားကို ငါ့ခပ်ဝေးဝေးဆီ ခိုးဝှက်သယ်ယူသွားဖို့
ငါ့အိပ်မက်တွေကို သံခြေကျင်းခတ်ထားဖို့ . . . မိသံစဉ်ရယ်
ဒီမှာ . . . မျက်မမြင်တစ်ပိုင်း ဒုက္ခိတတစ်ပိုင်းနဲ့
နင့်ဆီကိုပဲ စီးဆင်းနေတဲ့အကြောင်း နင်မသိဘူး
နင်ဟာငါ့ရဲ့ အဆိပ်ဖြေဆေးဖြစ်တဲ့အကြောင်း နင်မသိဘူး
ဘာဆိုဘာမှ နင်မသိဘူး မိသံစဉ်
နောက်ဆုံး . . . နင်ငါ့ကိုမချစ်ဘူးဆိုတာတောင် နင်မသိဘူးလေ
အဲဒီလို . . . ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ရက်တွေထဲ
ငါဟာ ကျောက်တုံးကျောက်ခဲလို ခက်ထန်လာတယ်
အဲဒီလိုနဲ့ . . . . တဖြည်းဖြည်းနဲ့ . . . .
နင့်ကိုငါမုန်းတယ် . . . . နင့် ကို ငါ မုန်း တယ် မိ သံ စဉ် . . . .
ရထားဟာ “တစ်သက်စာထွက်ခွာတော့မယ်” လို့အချက်ပေးတာ
တစ်လှမ်းချင်း တစ်လှမ်းချင်း ငါ အားတင်းပြီးလျှောက်နေရတာ
မူရင်းကို အစိတ်စိတ်အမြွှာမြွှာ စုတ်ဖြဲပစ်လိုက်တာ
အဲဒါ . . . အဲ ဒါ . . . မုန်းတဲ့သီချင်းပဲ
“နင့် ကို ငါ မုန်း တယ်” လို့ ငါဆိုပြချင်တဲ့သီချင်းပဲ မိသံစဉ်
. . . . . . . . . စိတ်ဒဏ်ရာကို
စာကြောင်းတိုင်းမှာ နင့်လှောင်ရယ်သံတွေနဲ့ . . . တ ဆစ် ဆစ် . . . . နာ ။ ။
Mysuboo Fanclub နှစ်နှစ်ပြည့် Ceremony အကြောင်း
Mysuboo Fanclub မှ ညီအစ်ကို မောင်နှမများခင်ဗျာ . . . .ကျနော်တို့ Mysuboo Fanclub ရဲ့သက်တမ်းဟာ အခုဆိုရင် နှစ်နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။(တကယ်တော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီလ ၈ ရက်နေ့မှာပြည့်ခဲ့တာပါ)ဒီနှစ်နှစ်အတွင်းမှာ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း အခက်အခဲပေါင်းစုံ၊ အတိုက်အခိုက်ပေါင်းစုံကိုလည်းကျနော်တို့တွေ ခံခဲ့ကြရပြီးပါပြီ။
ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ Member တွေအားလုံးရဲ့ စည်းလုံးတဲ့စိတ်ကြောင့်၊ မောင်နှမသားချင်း စိတ်ကြောင့် အခုလို နှစ်နှစ်ပြည့်တဲ့အထိ ကျနော်တို့ ရောက်ရှိလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ (အဟဲ . . . ဒီစကားတွေက ကိုလိန်ကြီး မီတင်မှာ မိန့်ခွန်းခြွေရမယ့် စကားတွေ . . . သူပြောလို့မရအောင် . .
ကြိုပြောထားလိုက်တာ :P)။ဒီ ၂၀၁၀ ထဲမှာတော့ ကျနော်တို့ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တုန်းကအတိုင်းပဲပရဟိတလုပ်ငန်းတွေကို အရှိန်အဟုန်ကောင်းကောင်းနဲ့ သွားရောက်လှူဒါန်းကြမှာပါ။အခုကျနော်တို့ Mysuboo Fanclub ရဲ့ နှစ်နှစ်ပြည့် Ceremony ကို ကျင်းပပါမယ်။
နေရာကတော့ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ အလယ်ဘလောက်၊ မြစံပယ်ကဖီး အပေါ်ထပ်မှာပါ။လာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့ (၃၁. ၁. ၂၀၁၀) ပေါ့။ နေ့လည် တစ်နာရီတိတိမှာ စတင်ကျင်းပပါမယ်။အဲဒီနေ့ရဲ့ အစီအစဉ်တွေက ဘာတွေရှိသလဲဆိုရင် . . . .နာယကကြီးကိုလူလိန်က နည်းနည်းပါးပါး စကားပြောမယ်။ပြီးရင် ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာ သွားလှူဖို့ရှိတဲ့ Donation အကြောင်းလေးတွေပြောမယ်။မတ်လထဲမှာ ကျင်းပဖို့ရှိတဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ ပြဇာတ်နဲ့ အငြိမ့်ပွဲအကြောင်းပြောမယ်။တစ်နှစ်စာ ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းတွေကို ရှင်းလင်းတင်ပြမယ်။အဲဒါတွေပြီးရင်တော့ Gathering သဘောလေးလည်း ဖြစ်တဲ့အတွက် ပျော်ပျော်ပါးပါး Game လေးတချို့
ဆော့ကြမယ်၊ စကားပြောကြမယ်။(သူငယ်ချင်းတွေ စုစုစည်းစည်း မဆုံဖြစ်တာလည်း ကြာပြီမဟုတ်လား)နောက်ပြီး ကဗျာရွတ်တာကို နားမထောင်ဖူးတဲ့သူတွေအတွက် ကဗျာလည်းရွတ်ပြဦးမယ်။၂၀၀၉ ခုနှစ်အတွင်း Mysuboo Fanclub ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုမှတ်တမ်းတင် DVD အခွေကိုလည်း ဖွင့်ပြထားပေးပြီးတော့ ဝယ်ချင်သူတွေကို ပြန်ရောင်းချပေးမယ်။ထူးခြားတာတစ်ခုကတော့ ကြိုပြီးကြေငြာထားတဲ့အတိုင်း မတ်လထဲမှာကမယ့် ပြဇာတ်၊ အငြိမ့်အတွက်ကကြမယ့်၊ သရုပ်ဆောင်ကြမယ့်သူတွေကိုပါ Meeting ခေါ်ထားပါသေးတယ်။အဲဒီနေ့မှာ ပြဇာတ်တွေ၊ အငြိမ့်တွေအတွက် သရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ လိုက်ဖက်မယ့်ဇာတ်ရုပ်ကို ရွေးချယ်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။အဲ . . . ကျနော်တို့ရဲ့ နှစ်နှစ်ပြည့် Ceremony ကို Fanclub Member များအားလုံး အင်တိုက်အားတိုက် တက်ရောက်စေချင်ပါတယ်။ကျနော်တို့ Fanclub ရဲ့ စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို ပြကြရအောင်လို့ပါ။နေရာ၊ အချိန်နဲ့ နေ့ရက်ကို အောက်မှာတစ်ခါထပ်ပြီး ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ နေ့ရက် ။ ၃၁. ၁. ၂၀၁၀ (တနင်္ဂနွေ)အချိန် ။ နေ့လည် ၁ နာရီနေရာ ။ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း အလယ်ဘလောက်၊ မြစံပယ်ကဖီး (အပေါ်ထပ်)
မီးညှိလို့တောင်မရတော့တဲ့ ဆေးပေါ့လိပ်အတိုလား ပါရမီရှင်လား၊
ဥစ္စာခြောက်ရင်လည်း ငရဲရောက်တာ သိစေလို . . .
ကျွန်တော်မတွေးတတ်တော့ဘူး . . . ခင်ဗျားဘာလဲဆိုတာ
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂီယာထိုး ကိုယ့်ကိုယ်ကို စက်နှိုး
ဆက်နှိုး . . . ဆက်နှိုး . . . မနိုးမချင်းပေါ့ စက်နှိုး
“အေး ချမ်း ငြိမ်း ဖြူ စင် မြင့် မြတ်”
နာမည်ကတော့ အမိုက်စားပဲ . . . ဒါကလွဲလို့
[ အဆုံးအထိ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် ]
၂၀၁၀ စိတ်အဆာပြေ ၂၅
`၂၀၁၀ စိတ်အဆာပြေ ၂၅´
အခုကစပြီး ကဗျာရေးတော့မယ်ဆိုရင် အရင်က ကဗျာရေးနေတုန်း နှစ်မြှုပ်ထားတဲ့ စိတ်ထက် (အနည်းငယ်) စိတ်အနည်းငယ် ထပ်ပြီး ပစ်ထည့်ကြည့် . . . . အသုံးအနှုန်းကိုက စိတ်အဆာပြေ ၂၀၁၀ ခုနှစ်ရဲ့ စိတ်အဆာပြေ ၂၅ နှစ်မြောက် . . . . ခေတ်ကိုက စိတ်နဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ခေတ်။
စိတ်နဲ့နိုးထတယ်၊ သွားစရာလာစရာရှိရင် စိတ်နဲ့သွားတယ်၊ စိတ်ကို စိတ်နဲ့ပဲထွန်ယက်၊ ကဗျာရေးရင် (ခဲတံ၊ ဘောလ်ပင်၊ လက်) ဘာနဲ့မှ မဟုတ်ဘူး . . . စိတ်နဲ့ရေးသား၊ အခုကဗျာကိုလည်း စိတ်နဲ့ဖတ်ပါ (တစ်နည်း ။ ။ စကားလုံးတိုင်း၊ စကာစုတိုင်း၊ ၀ါကျတိုင်းကို မျက်လုံးနဲ့ ကောက်ယူပြီး စိတ်နဲ့ ကိုင်တွယ်ပွတ်သပ်တတ်ဖို့ လိုအပ်တယ်)။
အကောင်းစားတွေချည်း ရေးပေးထားတာ မဟုတ်တဲ့ ကဗျာဖြစ်တဲ့အကြောင်း စိတ်နဲ့သိမှတ် . . . . ကာယကံရှင်ရဲ့စိတ်ကို နည်းနည်းဖတ်ကြည့်မယ်၊ ပြောဆိုမယ်၊ ဝေဖန်ရမယ်ဆိုရင် . . . . မျက်လုံးတွေ သိပ်အလှကြီး မဟုတ်ဘူး၊ မျက်လုံးအကြည့်တွေကို ကြိုက်တယ်၊ မျက်လုံးတွေထဲမှာ စိတ်သက်တမ်း နုနယ်မှုနဲ့၊ ဒါပေမယ့် လူသက်စိတ်သက် ကွက်တိ။
ဘာကြောင့် ကဗျာရေးသလဲ၊ ဘာနဲ့ကဗျာရေးသလဲ၊ စိတ်ခံစားမှုကို အစိတ်စိတ် အပိုင်းပိုင်း စိတ်ပိုင်း . . . . မိန်းကလေး တစ်ယောက်ရှိတယ်၊ ယုံမွန်တစ်ယောက်ရှိတယ်၊ ၀င်းထက်ထက်ငြိမ်းတစ်ယောက်ရှိတယ်၊ အသေအချာ . . . တစ်ယောက် တည်းပဲရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူဘူး၊ အသေအချာကို သုံးယောက်၊ စိတ်ခံစားမှုသုံးခုနဲ့ ခွဲဖြာ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ အနုပညာ (ရက်ရက်စက်စက် မြိုချခံထားရတဲ့) အနုပညာတချို့။
အရင်ကစိတ်ထက် အခုပိုပြီး ရင့်ကျက်လာတယ်ဆိုရင် ပုံမှန်၊ အခုလက်ရှိ စိတ်ရင့်ကျက်မှုကနေ တဖြည်းဖြည်း လျော့ကျသွားတာဆိုရင် ဒါ . . . ထူးခြားပြီ (ရူးသွားပြီ) ဆိုတော့ စိတ်ဟာ အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကြား ကြိုးတန်းလမ်းလျှောက်၊ ဆိုပါစို့ . . . နက်မှောင်သန်စွမ်းတဲ့စိတ်၊ မပုလွန်း မရှည်လွန်းတဲ့စိတ်၊ ရယ်ပြုံးကွေးညွတ်နေတဲ့စိတ် . . . . ဒါဟာ အဲဒီစိတ်အနေအထားကို (ဒီဖက်က) စိတ်အနေအထားတစ်ခုနဲ့ လှမ်းပြီး စုံစမ်းထောက်လှမ်းတာ (စိတ်အမှန် ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်)၊ ရှင်းရှင်းပြောရရင် စိတ်ရင့်ကျက်မှုချင်း ပုခုံးချင်းတိုက်တာ . . . အရပ်ချင်းတိုင်းတာပါပဲ။
ခရစ်နှစ် ၂၀၁၀ ဆိုတာ (စိတ်ထဲမှာ မနှစ်ကထက် ဒီနှစ်နည်းနည်း တိုးပွားလာတာ) ဇန်န၀ါရီဆိုတာ (စိတ်ထဲမှာ မနှစ်က အေးသလောက် ဒီနှစ်သိပ်မအေးနိုင်တဲ့ ပုံမှန်ဧည့်သည်) ၂၅ နှစ်ပြည့်ဆိုတာ (စိတ်ထဲမှာ ကိန်းဂဏန်းအချို့ လိုတိုးပိုလျှော့ လုပ်တာ) . . . တကယ်တော့ ဒါပါပဲ၊ ဒီလောက်ပါပဲ . . . (ကာယကံရှင်ရဲ့) စိတ်ကို ခပ်ချွန်ချွန် ခပ်မြမြသွေးပြီး ထိုးဖောက် ကြည့်ရင် စိတ်ထဲမှာ စိတ်ဆိုတာ (ခြေဆော့လက်ဆော့) မျောက်တစ်ကောင် သာသာပါပဲလားလို့ ဒီကဗျာ ထင်သလောက်လည်း မကောင်းတဲ့အကြောင်း တွေးမိသွားလိမ့်မယ် ။ ။
မှတ်ချက်။ ။ သူငယ်ချင်း စာရေးဆရာမ ယုံယုံ အသက် (၂၅)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အမှတ်တရ ရေးသားပါသည်။
ကျနော်နဲ့ ဂွတီးဂွကျများ (၆)
ကျနော်ကြုံရတဲ့ ဂွတီးဂွကျလေးတွေအကြောင်း ရေးလာတာ အပိုင်း (၆)အထိ ရောက်လာပါပြီ။ စပြီးရေးတုန်းက SBTV လိုမျိုးရယ်ရမှာမဟုတ်ပေမယ့် တွေးပြီးပြုံးရုံလောက်ကလေးပြုံးမိတယ်ဆိုရင် ကျေနပ်ပါတယ်လို့ ရည်ရွယ်ခဲ့ပေမယ့် အားလုံးက ရယ်ရတယ်လို့ပြောကြတဲ့အတွက်လည်း ဝမ်းသာပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်လည်း အများကြီးမဟုတ်ရင်တောင် နည်းနည်းပါးပါးတော့ ရယ်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခဏတဖြုတ် …..
ဒီဇာတ်လမ်းမှာ ကျနော်ဂွကျရတာကတော့ စုဘူးထဲက ကျနော့်သူငယ်ချင်းကဗျာဆရာ ညီစိမ်း(ခ)သိုးမဲ ရဲ့ ပယောဂမကင်းပါဘူး။ သူရေးတဲ့ကဗျာကြောင့် ကျနော်ဒီလိုအဖြစ်မျိုးကြုံရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်ပုံကတော့ …… စုဘူးထဲမှာ ညီစိမ်းခဲ့တဲ့ “စာရွက်အိုရဲ့ငိုရှိုက်သံ ” ဆိုတဲ့ကဗျာကို ကျနော်ဖတ်မိတယ်။ အဲဒီကဗျာထဲက စာပိုဒ်လေးတစ်ပိုဒ်ကို ကျနော်က သဘောကျသွားပါလေရော။ ကဗျာစာသားနဲ့ သူဖန်တီးထားတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကလည်း နှစ်သက်ချင်စရာကောင်းပါတယ်။ အဲဒီ စာပိုဒ်လေးက ဒီလိုပါ။ ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
အဲဒီတော့ ကျနော်က အဲဒီအပိုဒ်လိုက်ကြီးကို Copy လုပ်ပြီး ကျနော့် GTalk ရဲ့ Custom Message မှာ တင်ထား လိုက်ပါတယ်။ ပြဿနာက အဲဒီမှာစတော့တာပါပဲ။ ကျနော့် Friend List ထဲက ကောင်မလေးတစ်ယောက်က ကျနော့်ကို ပြောင်စပ်စပ်နဲ့ လာမေးပါလေရောဗျာ။
“ကိုကြီး ….. ကိုကြီး”
“ဟေ ….. အေး ပြောလေ ဘာတုန်းဟ”
“ဟိုလေ …. သမီးတစ်ခုလောက်မေးချင်လို့”
“အေး ….. မေးလဟာ”
“ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခဏဖြုတ်ကြည့်တော့ ဘယ်လိုနေတုန်း ဟိဟိ”
“ဟမ် ….. နင်နော် နင်နော်”
အဲဒီတော့မှ ကျနော်လည်း လန့်ဖျန့်ပြီး Custom Message ကိုပြန်ကြည့်ရပါတယ်။ ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ ……. ညီစိမ်းရဲ့ ကဗျာက “ငါ့ ကိုယ် ငါ ခ ဏ တ ဖြုတ် ပျောက် ဆုံး သွား တယ်” ဆိုတဲ့ စာလုံးလေး (၁၁)လုံးပဲပါတာ။ ဒါပေမယ့် ပုံစံတစ်ခု ထဲထည့်ရေးတာဆိုတော့ အရှည်ကြီးဖြစ်ပြီး အပြည့်မပေါ်ဘဲ “ငါ့ကိုယ်ငါခဏတဖြုတ်” အထိပဲပေါ်နေတာကိုး။ ဒါကြောင့် ဒီကောင်မလေးက ကျနော့်ကိုလာနောက်သွားတာ။ တယ်လေ ….. ငါ့ကိုငါခဏဖြုတ်ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးဟေ့ ….. ခဏခဏဖြုတ်ကြည့်နေတာဟ လို့ပြောလိုက်ရရင် မကောင်းပဲရှိတော့မယ်။ အဟဲ … ကျနော့်မှာဖြင့် ရှက်လိုက်ရတာလေ။ အင်တာနက်သုံးချင်လို့
ကျနော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ IT နည်းပညာရပ်တွေ တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ထွန်းကားလာတာနဲ့အညီ ဒီပညာရပ်နဲ့ ကျင်လည်ကျက်စားသူတွေ၊ လေ့လာဆည်းပူးသူတွေလည်း များပြားလာပါပြီ။ အရင်က Software Engineer တို့ ၊ Network Engineer တို့ဆိုတာ ရှားပါးပစ္စည်းဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် နောက်ဆိုရင် မီးတိုက်သတ်ရင်တောင် ကုန်မှာမဟုတ်တဲ့အခြေ အနေကို ရောက်လာပါတော့မယ်။ ကျနော့်အတွေးက ဒီနေရာအထိ ပြဿနာမရှိသေးပါဘူး။ ပြဿနာရှိတာက ဘယ်လို အတွေးစပဲရရ နောက်တီးနောက်တောက်၊ ပေါက်တီးပေါက်ရှာတွေးတတ်တဲ့ ကျနော့်ဥာဉ်ပါပဲ။ ကျနော်က ဘယ်လိုဆက်ပြီး တွေးမိသလဲဆိုရင် ….
နောက်ဆို အင်တာနက်ဆိုင်တွေဟာ အခုကွမ်းယာဆိုင်တွေပေါများသလို မှတ်တိုင်တိုင်း၊ လမ်းထောင့်တိုင်းမှာ ပေါများလာတော့မယ်။ အဲဒီကျရင် ကျနော်တို့လည်း အခုကွမ်းယာ လွယ်လွယ်ဝယ်စား ကြသလို အင်တာနက်ကို လွယ် လွယ်ကူကူ သုံးကြတော့မယ်။ ဥပမာ …….
“အစ်ကိုရေ …. ကျနော့်ကို အင်တာနက်နှစ်ရာဖိုးပေးပါ”
“အမရေ …. ကျနော့်ကို Wimax နဲ့သုံးရာဖိုး ….. တစ်ယာပိုပေးနော် အဲလေ တစ်နာရီပိုပေးနော်”
“ညီလေးရေ ….. အစ်ကို့ကို MPT လေးနဲ့ တစ်ရာ့ငါးဆယ်ဖိုး ကော်နက်ရှင်ထူထူလေးပေါက်ပေးနော် ဟဲဟဲ”
“ညီမလေးရေ …. ကိုယ့်ကို Bagan ADSL နဲ့ဟေ့ … Network Game လေးပါတွဲမယ် …. ရော့ အရင်တခေါက် အင်တာနက်ကြွေးသုံးရာ”
“မာမွတ်ရေ …. ကျနော့်ကို အင်တာနက်နှစ်ရာဖိုး … ကဲပါ အကြွေငါးဆယ်ဖိုးပါထပ်ထည့်လိုက် …… ကော်နက်ရှင် ထူထူလေးနော် … ဟိုဘက်က စွပ်ပရားတို့ဆိုင်တောင် သွားတာမဟုတ်ဘူး …. မာမွတ်ဆီလာတာ ဟင်းဟင်း”
ဟဲဟဲ … ကျနော်ကတော့ အဲဒီလိုမျိုးဖြစ်လာလိမ့်မယ်ထင်တာပါပဲ။ ဘယ်လိုလဲ လမ်းထိပ်မှာ အင်တာနက်ဆိုင် ဖွင့်ကြဦးမလား။
ဟိုတလောက ကျနော်တို့သူငယ်ချင်းတစ်သိုက် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်တုန်း သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ပြော လာပါတယ်။ သူအလုပ်မလုပ်တာလည်းကြာပြီ။ သူ့အိမ်ကလည်း အလုပ်မလုပ်ဘဲ အလေလိုက်နေလို့ ဆူနေပြီတဲ့။ အလုပ် လေးတစ်ခုလောက် ပြန်လုပ်ချင်လိုက်တာတဲ့။ အဲဒါနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးက ဝိုင်းပြီးစဉ်းစားပေးကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သိတော်မူတဲ့အတိုင်း ကျနော်တို့သူ့အတွက်စဉ်းစားပေးတာက အကောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်လို “ကျပ်” လွှတ်ရမလဲလို့ စဉ်းစားတာပါ။ ခဏနေတော့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ဆရာကြီးလေသံနဲ့ထပြောတယ်။ ဆေးလိပ်ကို မိန့်မိန့်ကြီးခဲလို့ …
“မင်း…………….ကွာ အလုပ်လေးတစ်ခုလောက်လိုချင်တာများ …. ဟဲဟဲ”
ဟိုကောင်ခမျာ ဝမ်းသာအားရနဲ့ ဆောင့်ကြောင့်လေးပြင်ထိုင်ပြီး မေးရှာပါတယ်။
“ဟ …. မင်းရှာပေးနိုင်တယ်လား”
“အေး …. ရှာပေးနိုင်တာပေါ့ကွ အခုလောလောဆယ်တင် ငါ့ကိုအလုပ်တစ်နေရာစာလွတ်နေလို့ ရှာပေးခိုင်းထား သေးတယ် မင်းနဲ့ဆိုအတော်လောက်ပဲကွ”
“ဟေ .. အဟေးဟေးဟေး ဟုတ်လား ပြောစမ်းပါဦး ပြောစမ်းပါဦး”
“ဒီလိုကွာ မင်းလုပ်ရမှာအရမ်းလည်းသက်သာတယ် မနက်ကိုးနာရီကနေ ညနေငါးနာရီအထိပဲ ပြီးတော့ တနင်္လာ ကနေ သောကြာအထိပဲ သွားရမှာကွ စနေ၊ တနင်္ဂနွေ နှစ်ရက်လုံးပိတ်တယ်”
“ဟေ အေး …. မိုက်တယ်ဟ ဘယ်မှာလုပ်ရမှာတုန်း လခကရော ဘယ်လောက်လဲ”
“အေးကွ လခကလည်းအပျံစား တစ်လကို ကိုးသောင်းခွဲတောင်ရမှာဟေ့ … ဘယ်မှာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ …. အင်း … ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာနလေ သိတယ်မဟုတ်လား အဲ့ဒီမှာဗျား အဲဒီမှာ”
အမလေးလေး ….. ဟိုကောင်ဖြစ်သွားလိုက်တဲ့ပုံများ ပြောမနေနဲ့။ သူ့ကိုယ်သူ တစ်လကိုးသောင်းခွဲလည်းရဦး မယ်၊ တစ်ပတ်ကိုလည်း ငါးရက်ပဲဆင်းရမယ်၊ လုပ်ရမယ့်နေရာကလည်း အိနြေ္ဒရရ ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာနဆိုတော့ ဝမ်းသာ နေလိုက်တာပြောမနေနဲ့။ ဒါနဲ့ ဝမ်းသာအားရ ဆက်မေးပါတယ်။
“အေး….. ဒါတော့ဟုတ်ပါပြီ … ဒါပေမယ့် ငါကအဲဒီမှာ ဘာလုပ်ရမှာလဲပြောဦးလေကွာ”
“ဟေးဟေး မင်းဘာမှ ပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်စရာမလိုဘူး မနက်ကိုးနာရီရုံးရောက်တာနဲ့ မင်းသံမံတလင်းမှာ ငြိမ်ငြိမ် လေးလှဲနေရုံပဲ တစ်နေကုန် မင်းကို ပတ္တလားလုပ်တီးကြမှာလေ ဟီးဟီး” လဲဆိုရော ဆဲလိုက်တာများဗျာ …… အမျိုးကိုစုံ သွားတာပဲ။ ပြီးတော့ စိတ်ကောက်ပြီး စူပွစူပွနဲ့ ပြန်သွားပါလေရော။ တော်တော်လေး ဂွကျသွားပုံရပါတယ်။ ကျနော်တို့ ကျန်ခဲ့တဲ့ကောင်တစ်သိုက်က အဲ့ဒီအကြောင်းကို တစ်နေကုန်ပြောပြီး ရယ်လို့မဆုံးတော့ဘူး။ သူရဿဝါ
“ လွင်ပြင်ဂီတ ”
နှင်းဆီဝါရေ. . . ဟောဒီလွင်ပြင်ရဲ့ဂီတမှာ ငါ တသုန်သုန် “က”နေလိုက်ချင်ရဲ့ မိုးးတိမ်တွေဖြန့်ချထား. . . အနီရောင်မိုးတိမ်တွေဖြန့်ချထားပါ နတ်ဆိုးတို့ရဲ့ ခရုသင်းသံတွေကြားမှာ မီးလျံပန်းပွားတွေ ပျောင်းသွဲ့လွန့်လူးလို့
ဒါဟာ. . . ဘယ်လိုဂီတသံစဉ်လဲကွယ်
ငါ့ကိုယ်ငါ အသွင်ပြောင်းပစ်လိုက်ရတဲ့ည . . . . လျှပ်ပန်းလျှပ်နွယ်တို့ ၀ိုးဝိုးဝါးဝါးအုပ်ဆိုင်းတဲ့ည. . . ဒီလိုညမှာပေါ့နှင်းဆီဝါရယ် . . . ငါ. . . ငါ့အတ္တကိုအုပ်မိုး ပျိုးပျိုးလက်လက် “က”နေခဲ့ပါတယ်
ငါ့ရဲ့ဦးတည်ရာကဘာလဲ. . . ငါဘယ်ကိုသွားနေခဲ့တာလဲ. . .
တကယ်တော့ မြားတစ်စင်းရဲ့ သူရဲကောင်းဆန်သောအပြုအမူဆိုတာ. . . ငါမသိနိုင်ခဲ့ဘူးကွယ် “တေးဆိုနေတဲ့မိုးတိမ်တွေ ရပ်တန့်ကြ” . . . အဲဒီလိုလည်း ထွင်းဖောက်မသွားနိုင်ကြဘူး ညှို့က လွှတ်တဲ့မြားပါပဲ. . . ဒါပေမယ့် ကျရှုံးခဲ့တယ်. . . နှင်းဆီဝါရေ . . . ငါဟာ ညှို့ဆီကိုပြန်လာချင်စိတ်မရှိသော. . . ပြန်လည် မတမ်းတရဲသော. . . သေဆုံးပျက်ယွင်း “မြား”တစ်စင်းပါပဲ။
သေမလောက် ဝေး. . .ခဲ့. . .ကြ”
ပန်းရိုင်းမလေး နှင်းဆီဝါရယ်. . .
မလွမ်းချင်ဘူးဆိုပြီး. . .ငါ
. . . လွမ်းတယ်. . .”
ဒီကမ္ဘာမှာတော့ . . . ငါဟာ ပြန်လည်ရှင်သန်ခွင့်မရှိတော့တဲ့ လိပ်ပြာတစ်ကောင်ပါ ငါဆိုတဲ့ အင်းဆက်ပိုးမွှားဆီကိုမှ နင့်ရနံ့တွေ (ခဏလေး) စီးလွင့်ပျံ့ကျလာခဲ့တာ. . . ၀တ်မှုန်ကူးသော လေထုထဲကရနံ့တွေ. . . ပန်းရိုင်းမလေးရဲ့ မထီတရီပွင့်ဖတ်နှုတ်ခမ်းတွေ . . . ဆာ. . . တယ် ပန်းတွေသွန်းခဲ့ ပျိုးခဲ့သော လက်အစုံမှာ နှင်းဆီဝါကိုပေးချင်တဲ့လက်ဆောင်ကလေး. . . နင့်ရဲ့ ငြင်းပယ်လိုက်သောမျက်ဝန်းတွေအောက် ပျောက်သွားတယ် ပန်းခေတ်ထဲက ပန်းရိုင်းမလေးရေ . . . မလွမ်းချင်ဘူးဆိုရင်းက ငါပဲ လွမ်းနေရပြန်တယ်
ပြောစရာမရှိတော့ပါဘူး . . . ဝေးလွင့်ကွယ်ပျောက် . . . . ပြောလို့မရလောက်အောင် ငါ့အသံတွေပါကွဲအက်ေ၀၀ါး . . . . အဲဒါနင်ပြုစားခဲ့တာပါ နှင်းဆီဝါရေ . . .
နင်မြင်ဖူးချင်တယ်ဆိုရင် ရင်ဘတ်တစ်ခြမ်း “ပျောက်” သွားတဲ့ကောင်ကိုပြပါ့မယ် ပူလောင်ပြင်းပြမှု. . . နာကျင်ရှတမှု. . . ဘာတစ်ခုမှမသိလိုက်ရဘဲ သေသွားတဲ့ကောင်လေ ခဏလေးပါပဲ . . .ရောင်စုံသက်တန့်တွေ. . . နတ်သမီးအပြုံးတွေ . . . ပန်းဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ ရင်ဘတ်ကိုခွာချလိုက်သံတွေ . . . မျောလွင့်သွားတာတွေ . . . ခဏလေးမြင်လိုက်ရပြီးနောက် ငါကိုယ်တိုင် မမြင်နိုင်ခြင်းတွေအောက် . . . ငါရောက်သွားတယ် နင်ဟာ “တကယ့်ကို” လှလှပပစုန်းမတစ်ကောင်ပဲ နှင်းဆီဝါ . . . . .
တမြေ့မြေ့ပြာ. . .ကျ”
ပြီးဆုံးသွားတာတွေတောင်မဟုတ်ဘူး. . . အရာအားလုံး အသစ်ကနေပြန်စသွားတာ. . . အခုထိ မီးလျှံတွေကြာမှာ ငါ. . . “က” နေတုန်း ကြေကွဲလောင်မြိုက် “က” နေတုန်း. . . နတ်ဘီလူးသံစဉ်နဲ့ ဖွာလွင့်နေတုန်း . . . .
“လွင်ပြင်ဂီတ” မှာ တစ တစ ပြာကျသွားသူ . . . .
ကောင်မလေးရေ. . . နှင်းဆီဝါရေ. . . ငါ့ရင်ထဲကနေ နင့်ကိုယ်နင် သေဆုံးပစ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အသိမှာတင် ငါကိုယ်တိုင်ပါ သေ . . . ဆုံး . . .
သွား . . . . ခဲ့ . . . . . တာ . . . . . . ။
(ရိုးရာ ရေးသားသော “လွင်ပြင်ဂီတ” ကဗျာအား ပြန်လည်ခံစားရေးဖွဲ့ပါသည်)
Mysuboo Fanclub နှစ်နှစ်ပြည့်အငြိမ့်၊ပြဇာတ်ကရန်အတွက်ဝါသနာရှင်သရုပ်ဆောင်ခေါ်ယူခြင်း
Mysuboo Fanclub နှစ်နှစ်ပြည့် ပြဇာတ်နှင့် အငြိမ့်ကရန်အတွက် ဝါသနာရှင်များဖိတ်ခေါ်ခြင်း
ကျနော်တို့ Mysuboo Fanclub ရဲ့ နှစ်နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ အငြိမ့်ကဖို့ စီစဉ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းကို သူငယ်ချင်းတော်တော်များများ သိကြမှာပါ။ တကယ်လို့ မသိကြသေးဘူး ဆိုရင်လည်း ဒီနေရာမှာ အဲဒီပိုစ့်ကို သွားရောက် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
အခု ကျနော်တို့ ကြိုတင်ကြေငြာ ထားတဲ့အတိုင်း ပြဇာတ်ကဖို့ အချိန်နီးကပ်လာပါပြီ။ ဒါပေမယ့် အစက အသိပေးထားသလို ဖေဖော်ဝါရီ (၁၄)ရက်နေ့မှာတော့ မကဖြစ်တော့ပါဘူး။ ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေတဲ့အတွက် မတ်လထဲကို ရွှေ့လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီလို ရက်ရွှေ့ထားတာ ကလွဲရင် ကျန်တာတွေ အကုန်လုံးက မူလစီစဉ် ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ နဂိုစီစဉ် ထားတာထက်တောင် ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလာပါသေးတယ်။
ကျနော်တို့ စီစဉ်နေတဲ့ အနေအထား ကိုပြောပြပါ့မယ်။ ပထမဆုံး စတိတ်ရှိုး အစီအစဉ်နဲ့ စဖွင့်မယ်ဗျာ။ နိုင်ငံကျော် အဆိုတော် တချို့လည်း လာပြီးကူညီ သီဆိုပေးကြမယ်။ Mysuboo Fanclub က ဝါသနာရှင် တချို့လည်း သီဆိုကြမယ် (အသံကောင်းပြီးသား Suboo Selection တွေပေါ့နော် :P)။ စတိတ်ရှိုး အစီအစဉ် ပြီးတာနဲ့ အူတက်မတတ် ရယ်ရမယ့် တစ်ခန်းရပ် ဟာသပြဇာတ် ကပြပါမယ်။ ပြီးတာနဲ့ နောက်ထပ်ပြဇာတ် တစ်ပုဒ်ကျရင်တော့ ရှေ့တစ်ပုဒ်နဲ့ မတူခြားနားတဲ့ အချစ်အလွမ်း ရသစုံတဲ့ ပြဇာတ်တစ်ပုဒ် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ ပြဇာတ်နှစ်ပုဒ် ကပြပြီးရင်တော့ ပရိသတ်အကြိုက် ကိုမောင်မောင်အေးတို့၊ ကိုဆန်းထွဋ်တို့ရဲ့ နာမည်ကျော် Dream Boat အဖွဲ့ရဲ့ ကစားနည်းတွေ ပါဝင်လာပါမယ်။ လာကြည့်တဲ့ ပရိသတ်တွေ ကိုယ်တိုင် ဝင်ကစားပြီး ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ဒီပွဲကို ပါဝင်ဆင်နွှဲ နိုင်အောင်လို့ စီစဉ်ထားတာပါ။ အဲဒါပြီးရင်တော့ သီချင်းနားထောင်လိုက်၊ ရယ်လိုက်၊ ငိုလိုက်၊ ဆော့လိုက် အမျိုးစုံ ခံစားပြီး မောနေကြမယ့် ပရိသတ်ကို ခဏတာ အညောင်းအညာ ပြေအောင် Break Time ပေးပါမယ်။ နောက်တစ်ခေါက် ပြန်စတဲ့အချိန်မှာတော့ ထူးထူးခြားခြား အနေနဲ့ IT ဟာသပြဇာတ် တစ်ပုဒ် တင်ဆက်ကပြ သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါတွေ အားလုံးအပြီးမှာတော့ အများမျှော်လင့် စောင့်စားနေကြတဲ့ စုဘူးအငြိမ့်သဘင်ကြီး စတင်ပါမယ်။ စုဘူးရဲ့ လှတပတ မင်းသမီးချောလေး နှစ်လက်ရဲ့ အကအလှတွေရယ်၊ ဖန်တရာတေ ပျက်လုံးအဟောင်းတွေ မဟုတ်ဘဲ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ရယ်မောရမယ့် စုဘူးနာမည်ကျော် လူရွှင်တော်တွေရဲ့ ပျက်လုံးတွေကို မျက်တောင်မပွင့်စတမ်းအိပ်ငိုက် (အဲလေ) မျက်တောင်မခတ်စတမ်း ရှုစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်ဗျား။ အငြိမ့်မှာ ကပြကြမယ့် လူရွှင်တော်တွေကို သိလား။ မသိရင် အောက်ပါပုံကို ကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျာ။
ကျနော်လည်း ရေးရင်းရေးရင်းနဲ့ လမ်းကြောင်းလွဲ သွားပါပြီ။ တကယ်တော့ ဒီပိုစ့်က အထက်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ ပြဇာတ်တွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်မယ့် သရုပ်ဆောင် ဖိတ်ခေါ်တဲ့ပိုစ့်ပါ။ ဒါပေမယ့် ပြောချင်စိတ်ကို ထိန်းမရတာကြောင့် ကြိုပြောပြီးသား ဖြစ်သွားပါတယ်။ ကဲ …. အထက်မှာ ကျနော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း ကျနော်တို့နဲ့ အတူတူ ပြဇာတ်တွေ၊ အငြိမ့်တွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ချင်တဲ့ ဝါသနာရှင် သူငယ်ချင်းများ (ကျား/ မ မရွေး) ကို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ ပါဝင်ကပြချင်ပါတယ် ဆိုတဲ့သူများ ၂၀. ၁. ၂၀၁၀ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး ကျနော်တို့ကို ဆက်သွယ် စာရင်းပေးကြပါခင်ဗျာ။ ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာ ကျနော်တို့ ပြဇာတ်တွေ စတိုက်ကြမှာမို့လို့ပါ။ “ပြဇာတ်ကျရင် ငါလည်းကမှာနော်” လို့ အစောပိုင်း ကတည်းက ပါးစပ်နဲ့ ကြိုတင်စရံရိုက်ထားတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အနေနဲ့လည်း စာရင်းဝင်သွားအောင် Mail ပို့ပြီး စာရင်းပေးကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ ဆက်သွယ်ရမယ့် E-Mail တွေကတော့ . . . .
mysuboofanclub@gmail.com Mysuboo Fanclub Admin
junesai21@gmail.com ကိုစိုင်းနောင် (ခ) လူလိန်
thurathawah.ptk@gmail.com ကိုဘုန်းသန့်ကျော် (ခ) သူရဿဝါ
တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ အခု ကျနော်တို့ စီစဉ်ထားတဲ့ ပွဲဟာ IT နယ်ပယ်မှာ ပထမဆုံး စင်ပေါ်တက်ပြီး ပွဲကြီးတစ်ပွဲအနေနဲ့ ဖျော်ဖြေမယ့် ပြဇာတ်၊ အငြိမ့်ပွဲတစ်ပွဲ ဖြစ်လာမှာပါ။ ဒီတော့ ပရိသတ်တွေကိုလည်း လာကြည့်ကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်သလို (ကပြမယ့် နေ့ရက်၊ အချိန်၊ နေရာ တွေကို နောက်ပိုင်းမှာ ကြေငြာပေးသွားပါ့မယ်) အနုပညာ သရုပ်ဆောင် အလုပ်ကို ဝါသနာပါတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အနေနဲ့လည်း ဒီပွဲမှာ ပါဝင်ဖျော်ဖြေ နိုင်မယ် အခွင့်အရေးကို လက်လွတ် မခံဘဲ ကျနော်တို့နဲ့ အတူ ပူးပေါင်းဆင်နွှဲကြဖို့ ဒီနေရာကနေ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
အခန်းအမှတ်သုည ... လူအမှတ်သုည
“အခန်းအမှတ်သုည . . . . လူအမှတ်သုည”
အခန်းထဲမှာ မှောင်နေတယ်။ “အလင်း တစ်စက်လောက် ရမလား” ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက် မပါဘဲ တံခါးကို ဖွင့်လိုက်တယ်။
ဆန္ဒ၊ အတ္တ၊ ရမ္မက် ဘာမှမရှိတဲ့ မှောင်နေတဲ့အခန်းက ပွင့်လာတာကလွဲလို့ နဂိုအတိုင်း “အမှောင်စူးစူး”။
ခံစားချက်တွေ အမှောင်ချပြီး ပြန်လာခဲ့တဲ့ “ကိုယ်” ဟာ အဲဒီအခန်း မှောင်မှောင်ထဲမှာ အထင်းသား ပေါ်လွင်နေ….။
ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ မဖတ်ရသေးတဲ့ သတင်းစာအဟောင်းတစ်စောင်တွေ့တယ်။ မျက်နှာဖုံးမှာက သိပြီးသားဖြစ်တဲ့ လောလောလတ်လတ် ညနေအကြောင်း။ အင်းလျား ကန်ဘောင် ပေါ်မှာ လူသူလေးပါး တိတ်ဆိတ် ….. တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မမြင်ဘဲကြည့်နေတဲ့ ပျက်ယွင်း မျက်ဝန်းနှစ်စုံနဲ့ လေဟာနယ် ရေပြင်ပေါ် …… ဟင့်အင်း ….. ဒီထက်ပိုပြီး မသိချင်တော့ဘူး။
“…………………………” သီချင်းသံကြားရတယ်။ ဘာတီးလုံးမှပါမလာတဲ့သီချင်းသံ …. ရူးသွားပြီလားလို့ မှန်ရှေ့ရပ်လိုက် ……. ။ အမှောင်ကနဂိုအတိုင်း။ အမှောင်ကလွဲလို့ ဘာမှမမြင်ရဘူး။
နံရံမှာထောင်ထားတဲ့ ဂစ်တာတစ်လက် တွေ့တယ်။ မဆီမဆိုင် ….. ဇာတ်ဝင်ခန်း တစ်ခုကို ဘာလို့ သွားသတိရလဲ မသိဘူး။ ကြိုးခြောက်ကြိုးလုံးက အသံတစ်သံတည်း မြည်ပြီး တုန်ခါနေတယ်။ ဒါပေမယ့် ….. အခန်းကမှောင်နေ …… စိတ်ပျက်လက်ပျက် အဆိပ်သင့်နေတဲ့ဂစ်တာဖြစ်မယ်။ ဖြတ်လျှောက်လာခဲ့တယ် …… အခန်းကမှောင်နေတုန်း …….. ဂစ်တာကလည်း သူ့ကိုယ်သူတီးခတ်နေတုန်း ……. အသံကလည်းမြည်နေတုန်း ……… ဒါပေမယ့် ဘာသံမှမကြားရ …….။
ကော်ဖီတစ်ခွက်က စားပွဲပေါ်တင်လျက်သားရှိတယ်။ ညနေကအတိုင်း ပူလောင်ကျွမ်းရှနေသေးတယ် ……. စိတ္တဇနံ့တွေ တထောင်းထောင်းထလို့။ ဘယ်တုန်းကအငွေ့ပျံသွားလဲမသိဘူး …… ခွက်ထဲမှာ ဘာမှမရှိဘူး။ အမှောင်က ကော်ဖီရည်တွေကို စုပ်ယူသွားနိုင်သလား ……… သက်ပြင်းတစ်ရှိုက်ရှိုက်ပြီး ကော်ဖီခွက်ကိုမော့ချလိုက်တယ်။ အရသာက ကော်ဖီအတိုင်းပဲ ……… ခါးသက်ပြင်းပြ …….။ ကော်ဖီခွက်ကို ကြမ်းပြင်ပေါ် ပစ်ချလိုက်တော့ အခန်းထဲအနှံ့ ပြန့်ကျဲသွားတယ် ... ဖန်သားအပိုင်းအစတွေ။ ကွဲကြေသံတစ်ခုတစ်လေ မကြားရတာတော့ ထူးဆန်းတယ်။
“သူမ” သည် “သူ” အား
အတွေးတွေကို အမှောင်ခန်းထဲ လွှင့်တင်ထားရင်း သုညစိတ်နဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ် ရေရွတ်မိတယ်။
ရူးသွပ်မှု အစာသွတ်ထားတဲ့ ကဗျာမှာ ဘာဝိဥာဉ်မှ ပါမလာဘူး။ “ငါမှတပါး အခြားသူအား ………….” “ငါမှတပါး ……. အခြားသူအား ……”
“ဟယ်လို ….. ဟယ်လို ….. ဟယ်လို”
ဖုန်းသံမြည်လာတဲ့အချိန်မှာ ဖုန်းပလပ်ကိုဖြုတ်ထားခဲ့ပြီးပြီ။ ဘယ်သူကဖုန်းခေါ်နေတာလဲ ……. ဒါမှမဟုတ် ဘယ်သူ့ကို ဖုန်းခေါ်မိတာလဲ။ ဖုန်းခွက်ကို ကောက်ကိုင်ပြီး နားထောင်လိုက်တော့ အလိုအလျောက် ဖုန်းဖြေစက်က အသံကို စိမ်းစိမ်းခဲခဲ ကြားရတယ်။ “လွန်ခဲ့တဲ့ညနေခဏဆီ ပြန် ရောက် နေ လို့ ……..” တစ်ခုခု မှားနေပြီဆိုတဲ့ အသိနဲ့ ဖုန်းပလပ်ကို ပြန်တပ်လိုက်မှ ဖုန်းမြည်သံက ပစ္စုပ္ပန်ကိုပြန်ရောက်လာတယ်။ ဘာသံမှမကြားရတော့ဘူး။
မှောင်နေတဲ့အခန်းတစ်ခန်းထဲ …….. သီချင်းသံအချို့ ……….. ဂစ်တာတစ်လက် ………. အကောင်းအတိုင်း ကွဲကြေနေတဲ့ ကော်ဖီခွက် ….. ရူးသွပ်မှုများနဲ့ကဗျာ ……. အဆက်မပြတ်ဖုန်းမြည်သံ………. ဟား ……. ကိုယ် “အလင်းတစ်စက်” လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် တောင့်တဆာလောင်လာမိတယ် ကိုယ့်ကို လာရောက်သယ်ဆောင်မယ့်အလင်း …….. ဘယ်မှာလဲ။ လွန်ခဲ့တဲ့ညနေမဟုတ်တဲ့ တခြားတစ်နေရာဆီသွားမယ်။ မှောင်နေတဲ့အခန်းထဲကနေ ခြောက်ခြောက်ခြားခြားပြေးထွက်လာခဲ့မိ ……….. အခန်းတံခါးက အမှောင်ရင့်ရင့်ထဲ ပွင့်လျက်သား။
“အလင်း” တွေကျန်ခဲ့တဲ့ အခန်းရဲ့အပြင်မှာ တစ်လောကလုံး ……. ကန်း …. မှောင် ….. အ….. တိ …. ကျ …. သွားတယ်။
ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက် ၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်
ကျနော်ရဲ့ ဂွတီးဂွကျတွေကို မရေးဖြစ်တာကြာပါပြီ။ အခုတော့ နည်းနည်းလေး စိတ်အားလပ်နေလို့ ပြန်ရေးမယ် စိတ်ကူးမိပါတယ်။ ဂွတီးဂွကျတွေလည်း ခဏခဏကြုံနေရပြန်တာကိုး အခုတလော။ ဂွတီးဂွကျ အပိုင်း (၅) ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်ပေးကြပါဦး။
ကျနော်နဲ့ လက်ရှိပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေတဲ့ သူငယ်ချင်းအားလုံးလိုလိုက ကွန်ပျူတာလောက၊ အင်တာနက်လောကမှာ ကျင်လည်နေကြတဲ့ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ သိကြတဲ့အတိုင်း ကွန်ပျူတာသမားဆိုတာ ကွန်ပျူတာရှေ့ရောက်ရင် ထမင်းမေ့ဟင်းမေ့။ အင်တာနက်သုံးတတ်တဲ့သူဆို ပိုတောင် ဆိုသေးတာပေါ့။ ထိုင်မိရင် ထလို့မရတော့ဘူး။ အဓိကပြောချင်တာကတော့ ကျနော် အူကြောင်ကြောင်ဖြစ်ရတဲ့ ကိစ္စပါ။
တလောက အချိန်ပြည့်ကွန်ပျူတာပဲ သုံးမိတယ်။ ဘယ်မှလည်း ထွေထွေထူးထူးမရောက်ဖြစ်ဘူး။ ဘာ ကိစ္စပဲ ပေါ်လာပေါ်လာ လွှတ်ထားလိုက်တယ်။ အဲ …. အပြင်ပြန်ထွက်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ အဲ့ဒီတုန်းက ပေါ်လာ တဲ့ကိစ္စတွေကို ပြန်လုပ်ရပါလေရော။ အဲ့ဒီမှာ မလုပ်မဖြစ်လုပ်ရတာတစ်ခုကတော့ ဖုန်းတွေဆက်ရတာပါပဲ။ မှတ် မှတ်ရရ အဲ့ဒီနေ့က အလုပ်ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ သူငယ်ချင်းဆီကို ဖုန်းခေါ်ဖြစ်တယ်။ လမ်းဘေး PCO ဖုန်းဆိုင်ကနေ တဆင့်ပေါ့။ တစ်ယောက်တည်း ပြဿနာတက်ရတာ အဲ့ဒီမှာပါပဲ။ နှစ်ရှည်လများ ကွန်ပျူတာကိုင်လာတဲ့ အကျင့် က ဖုန်းဆက်တဲ့နေရာအထိပါလာပါတယ်။ ဘာလဲဆိုတော့ ဖုန်းခေါ်ဖို့ ဖုန်းနံပါတ်ခြောက်လုံးနှိပ်ပြီးရင် မပြည့်စုံ သေးဘူးလို့ခံစားရပြီး Enter နှိပ်ဖို့ ခလုပ်ကို လိုက်လိုက်ရှာနေမိတာပါ။ တစ်ခါမဟုတ်ပါဘူး။ ဖုန်းတစ်ကောလ် ခေါ်တိုင်း တစ်ခါ အကျင့်ပါနေတာ။ ဒီကိစ္စက တော်တော်လေးကို ဂွကျပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ရော အဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖူးလား မသိဘူး။ ပေါ်ရာကိုရှု
ဒီကိစ္စဖြစ်ပုံကတော့ တော်တော်လေးရယ်ရပါတယ်။ ပြန်တွေးတိုင်းလည်း ရယ်ချင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဘာ သာ အူကြောင်ကြောင်ဖြစ်ရတဲ့ကိစ္စပါ။ တစ်ရက်မှာ မြို့ထဲကိုရောက်ပါတယ်။ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်းမှတ်တိုင်မှာ ကားစောင့်ရင်း ဘေးနားက VCDတွေ CDတွေရောင်းတဲ့ဆိုင်ကို ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး ကြည့်မိတယ်။ အခွေတွေက တော့ တော်တော်စုံပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာ သီချင်းခွေတွေ၊ 8 IN 1 တို့ 16 IN 1 တို့လို ဗီဒီယိုကားတွဲတွေနဲ့ အပြိုင်ရောင်းအားကောင်းလာတာက တရားခွေတွေဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ တရားခွေတွေမှ နည်းတာမဟုတ်ဘူး။ တရားအစုံ၊ ဆရာတော်အစုံပါပဲ။ တရားခွေတွေလျှောက်ကြည့်ရင်းက အခွေတွေရဲ့ထိပ်ဆုံးမှာ ထောင်ထားတဲ့ တရားခွေတစ်ချပ်ကို ဘာရယ်မဟုတ်ကြည့်မိပါတယ်။ ယောဂီဝတ်စုံနဲ့ ဦးလေးကြီးတစ်ယောက် တရားထိုင်နေတဲ့ ပုံနဲ့ အောက်မှာ “ပေါ်ရာကိုရှု” ဆိုပြီးရေးထားတယ်။ ကျနော် စိတ်ဝင်စားသွားပါတယ်။ ဒီတရားခွေက ဆရာတော် တစ်ပါးပါးဟောတာမဟုတ်ဘဲ လူဝတ်ကြောင်ဓမ္မာစရိယတစ်ယောက်ယောက် ဟောတာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့။ ဒီထက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက “ပေါ်ရာကိုရှု” ဆိုတဲ့အမည်ပါ။ သူ့ရုပ်ကိုကြည့်တော့ အရှေ့တိုင်းရုပ်၊ ဗမာ ရုပ်ပဲ။ ဒါပေမယ့် နာမည်က အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ပေါ့လေ။ ဘာလူမျိုးလဲတောင် စဉ်းစားကြည့်လိုက်သေးတယ်။ ဒီလိုနာမည်မျိုး ဘယ်နိုင်ငံတွေမှဲ့တတ်သလဲပေါ့။ လားလား ….. သေချာကြည့်မှ တစ်ယောက်တည်းအရှက်ကွဲ တော့တာဗျာ။ ဘယ်ဟုတ်မလဲ …… ပေါ်ရာကိုရှုဆိုတာ လူနာမည်မှမဟုတ်ဘဲကိုး။ တရားထိုင်ရင် စိတ်ထဲမှာ ပေါ်လာတာကို ရှုမှတ်ခိုင်းတာလေ။ တရားခွေနာမည်က “ပေါ်ရာကိုရှု” ဖြစ်နေတာထင်တာပဲ။ ဟဲဟဲ… အခုထိ ပြန်တွေးမိတိုင်း အဲ့လောက်တောင် အသုံးမကျတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ရယ်နေမိတယ်။ တကယ့်ကို ဂွတီးဂွကျပါပဲ ပေါ်ရာကိုရှုရယ်။
အစ်ကို ……. ဖုန်းခေါ်ချင်လို့
ကျနော် အင်တာနက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ Staff လုပ်တုန်းကပါ။ အချိန်က ဆိုင်ပိတ်ခါနီးဖြစ်နေပြီ။ ည ဆယ်နာရီလောက်ပေါ့။ ဆိုင်မှာကလည်း လူရှင်းတော့ အေးအေးဆေးဆေး အင်တာနက်ထိုင်သုံးနေမိတယ်။ အဲ့ဒီ အချိန်မှာ ကောင်လေးနှစ်ယောက် ရောက်လာပါတယ်။ “အစ်ကို … ကျွန်တော်တို့ ဖုန်းခေါ်ချင်လို့ပါ” တဲ့။ ဒါနဲ့ ကျနော်လည်း Server ကိုထသွားလိုက်တယ်။ ကျနော်တို့ဆိုင်မှာက Pfingo ဖုန်းကို Server ကနေပဲ ခေါ်ပေးတာ များပါတယ်။ ကောင်လေးနှစ်ကောင်ကလည်း ယောင်တောင်ပေါင်တောင်နဲ့ အနားလာထိုင်တယ်။ ကျနော်က ဘယ်ကိုဖုန်းခေါ်မှာလဲလို့ မေးရတာပေါ့။ ကောင်လေးတွေကြည့်ရတာလည်း ဖုန်းဆက်လို့ရမယ့်နေရာကို မနည်း ရှာထားရပုံပဲ။ ဟုတ်တယ်…. ကျနော်တို့ဆိုင်က လမ်းကျဉ်းလေးထဲမှာဆိုတော့ ဒီအချိန်ဆို လူအရမ်းပြတ်တယ်။ အင်တာနက်ဆိုင်ကလည်း ကျနော်တို့တစ်ဆိုင်ပဲရှိတာလေ။
“ညီလေးတို့ ဘယ်ကိုခေါ်မှာလဲ ဖုန်းနံပါတ်ပြော” ဆိုတော့ …..
“5 ………” ဆိုပြီး ဂဏန်းခြောက်လုံးရွတ်ပြပါတယ်။ ကျနော်ကြောင်သွားတာပေါ့။ သတိလက်လွတ်ပြော လိုက်မိတယ်။ “ဟမ် …… ဘာဖုန်းကြီးလဲ”
“Handphone မဟုတ်ဘူးလေ အစ်ကို … ရိုးရိုးဖုန်း ကြည့်မြင်တိုင်ကိုခေါ်မှာ”
“အင်…… သေရော” ဆိုပြီး သူတို့ကို ရှင်းပြရပါတော့တယ်။ Pfingo ကနိုင်ငံတကာခေါ်တာဖြစ်တဲ့ အကြောင်းသေချာပြောပြရတယ်။ ကောင်လေးတွေလည်း မကျေမနပ်ဖြစ်သွားပုံရပါတယ်။ စူပွစူပွနဲ့ ကျနော့်ကို ပြောတယ်။ “အစ်ကိုကလည်း တခြားနိုင်ငံတွေတောင် ခေါ်လို့ရသေးတာ ကြည့်မြင်တိုင်လောက်တော့ မိုင်နာ နေမှာပါဗျာ လုပ်ပါ ခေါ်ပေးပါ”
စိတ်ကိုညစ်ရောပဲဗျာ။ ကျနော်လည်း ဘယ်လိုပြောပြောမရတဲ့အဆုံး ကောင်လေးနှစ်ကောင်ကို ပြန်ပြီး ဘုတောပြောရပါတော့တယ်။ “အစ်ကို ကဒုံကနိကို အရင်ခေါ်ကြည့်လိုက်ဦးမယ် ညီတို့ရေ ….. အဲ့ဒီကိုရမှသာ ပြန်လာခဲ့တော့” လို့။
ကျွန်တော်ဟာ . . . . သူ့အနားက
ကျွန်တော့်စိတ် . . . .
မှိတ်တုပ်မှိတ်တုပ်ဖြစ်ရတယ် ကြယ်လေးတွေလို ။
ကျွန်တော့်ရင်ခုန်သံဟာ ကြယ်မလေးဆီ ရိုးမြေကျ
ကြယ်မလေးရယ် . . . . ကျွန်တော်က တကယ်ကိုချစ်မိသွားတာ
ဘာမှလည်းမဆိုင်ပါပဲနဲ့ကွယ် . . . . နော်။
ကြယ်မလေး . . . .
ကျွန်တော့်ကိုပဲကြည့် ၊ ကျွန်တော့်အကြောင်းပဲ . . . .
သိ ပါ ကွယ် ။
လွမ်းတိုင်း . . . ကောင်းကင်ပေါ်မော့ မော့ကြည့်ရုံနဲ့
မကျေနပ်နိုင်တော့တဲ့အခါ . . . .
ကြယ်ပျိုးသူပေါ့ . . . . အဲဒီလိုလေး . . . .
ဖြစ် ချင် တယ် ။
သူ့နှုတ်ခမ်းလေးကိုရှေ့ထားပြီး . . . . .
အင်း . . . ကြယ်လေးရေ . . .
. . . . . . . မလန့်ပါနဲ့ ကြယ်မလေးရယ်
ကျွန်တော် . . . ကြယ်ကြည့်သူတစ်ဦးဖြစ်သွား
ကျွန်တော့်နံဘေးနားကို . . .
ကျွန်တော်လေ . . .
ကြယ်မလေးရေ . . . ကြယ်မလေးရေ . . .
ကျွန်တော်ဟာ ကြယ်မလေးယက်လုပ်တဲ့ အ၀တ်လေးတစ်ထည်ဖြစ်ချင်တယ်
သူဟာကျွန်တော့်ရဲ့ဆောင်းတွင်းလေး . . . အဲဒီလိုလည်း ဖြစ်ချင်တယ် ။
ပြောရင်းနဲ့ကို . . . ချစ် ချစ်လာမိတာ
ကြယ်မလေးရေ . . . ကျွန်တော့်ဆီကြွေပါ ။
ဒီကဗျာရေးပြီးတော့ ကြယ်မလေးကို ပေးမဖတ်ဝံ့ပြန်ဘူး
ရှက်တာပေါ့ကွယ် . . . . ကြယ်စင်မလေးရယ်
ကျွန်တော်က ချစ်မိသွားတဲ့အခါ . . . .
ရွှေပါရမီ (၁၆) ကြိမ်မြောက် အခမဲ့ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ချင်းပြည်နယ်၌ ကျင်းပ
ဥပဒေစာအုပ်တွေကို သည်လို တနေရာတည်းပေါင်းစုပြီး မျှဝေလိုက်ပါတယ်... လိုခင်ြသူများလည်းအဆင်ပြေစေဖို့ အတွက်.. ရှာဖွေစုဆောင်းပြီး ပြန်လည်မျှဝေခြင်းပါ.. ဘလော့...